Izindaba - Indlela yokunamathela nokuhlanza yomshini we-PUR oshisayo wokunamathisela wokunamathisela
Indlela yokunamathela nokuhlanza yomshini we-PUR oshisayo wokunamathisela wokunamathisela
Umshini wokunamathisela wokunamathisela we-PUR oshisayo oshisayo usebenzisa i-100% yokunamathela okuqinile okuncibilikayo okungenazo izithako eziyingozi. Ngemuva kokufudunyezwa kube isimo soketshezi, kufana futhi kufakwe njalo ebusweni bomsebenzi ukufeza inhloso yokunamathela. . Ngokuya ngezinto zokucubungula ezahlukahlukene, amafomu wokumboza ahlukile njengokuhambisa, ukufafaza nokugingqika, futhi ukumbozwa kwe-fiber kungakhethwa ngokulandelana. Ngenxa yokusebenza okulula kwemishini, ukubopha okuthembekile nokusheshayo, ukusebenza kahle kokusebenza kahle, ukusetshenziswa kokumboza okufanayo, ukusetshenziswa kweglu ephansi, ukungcoliswa kwemvelo, nokuhambisana nezidingo zamanje zokuvikelwa kwemvelo, kusetshenziselwe ukwenza izicathulo, ukupakisha, isikhumba izimpahla, amabhokisi ephepha, izesekeli, nezinto zokwakha. , Imishini yezemidlalo, imikhiqizo yenhlanzeko, amathoyizi, i-elekthronikhi, izinto zikagesi, isikhumba, ifenisha nezinye izimboni ziya ngokuya zikhethwa njengemishini yokusekela esekelayo.
Indlela yokuhlanza Ukuhlanza ikhanda ngommese: Ngemuva kokuthi umshini ushisiwe, usule nge-gauze eyomile.
Ukuhlanzwa kwe-roller: sula i-roller yensimbi engagqwali nge-gauze ehlanzekile eyomile efakwe ku-75% utshwala, uma kukhona i-glue ebusweni, sebenzisa i-gauze eyomile efakwe ku-1620 solvent / ethyl acetate solvent ukusula;
Ingcina ebusweni be-roller yerabha akumele iphathwe ngamakhemikhali awuketshezi wemvelo, ukuze ingalimazi i-roller yerabha, kufanele isuswe ngesinamathelisi esinamandla sokuphulukisa.
Ubuso bangaphandle bemishini; indlela yokuhlanza: sebenzisa i-gauze eyomile ehlanzekile efakwe ku-75% yotshwala ukusula.
Shintsha ukuhlanzwa kwe-batch: Hlanza ibhokisi le-glue kanye ne-hose yomshini we-PUR hot melt adhesive laminating machine (osebenza ekushintsheni imodeli yeglue nendlela yokumboza): Ngemuva kokukhipha i-glue yokuqala, engeza i-glue entsha 2 ~ 3Kg, bese uyishisa ize iphelele kuncibilikile. Ungabi nalutho, bese ufaka uhlobo olusha lweglue, ngemuva kokuncibilika ngokuphelele, khipha okungenani i-1Kg ukuqala ukukhiqizwa okuhlelekile.
Ukumboza ukugezwa kwekhanda lommese (kusebenza ekushintsheni imodeli yeglue nendlela yokumboza): Ngemuva kokuthi imishini ishisiwe, sebenzisa i-gauze eyomile ukusula.
I-roller endaweni yokuhlanganiswa kwengubo: Sebenzisa i-gauze eyomile ehlanzekile ukusula uthuli ebusweni. Uma i-glue itholakala ngaphezulu, ungasebenzisi izincibilikisi ezingokwemvelo ukugwema ukulimala ku-roller yerabha. Sebenzisa isinamathelisi esinamandla sokuphulukisa ukuze usisuse.
Ukuhlanza idivaysi ye-corona: Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ugesi ucishiwe, usule nge-gauze elomile elihlanzekile elifakwe ku-75% wotshwala.
Ukuhlanzwa komjikelezo okungalungisiwe komshini wokunamathisela wokunamathisela we-PUR oshisayo: ikhanda lokumboza lomshini we-PUR oshisayo wokunamathisela wokunamathisela umshini wokuhlanza kumele uhlanzwe lapho indlela yokumboza neleveli yesigaba seglue iguquka, futhi ikhanda lokumboza kufanele lisuswe ngaphambi kokuba i-glue iqiniswe . , Sebenzisa i-gauze eyomile efakwe ku-solvent ukusula ikhanda. Lapho okokusebenza kuvaliwe phakathi nenqubo yokukhiqiza, i-glue echichimayo kufanele isulwe nge-gauze ehlanzekile lapho okokusebenza kuvuliwe. Hlanza isikrini sesihlungi se-PUR hot melt adhesive adhesive and laminating machine isikhathi esingangenyanga. Ukuhlanza isihlungi sekhanda lokumboza lomshini we-PUR oshisayo wokunamathisela wokunamathisela umshini wokunamathisela.
Ukukhiqizwa kumiswe isikhathi esingaphezu kwenyanga eyodwa, futhi yonke imishini yokumboza kufanele ihlanzwe ngokuya ngokuqukethwe kanye nezidingo zalokhu okungenhla nsuku zonke, ngaphambi nangemva kokushintshwa kwe-batch, isigamu senyanga nokuhlanzwa komjikelezo okungaguquki ngaphambi kokuba kusetshenziswe; nge-PUR hot melt adhesive adhesive laminating machine glue Ngemuva kokukhipha i-glue yasekuqaleni, engeza cishe u-30Kg wamafutha amaminerali amhlophe ukuncibilikisa ingcina eseleyo. Ngemuva kokuqeda, engeza cishe u-30Kg kawoyela omhlophe wamaminerali ukuze uphinde uchithe futhi, bese ulinda ukuthi usetshenziswe ngemuva kokukhishwa ngokuphelele.
Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, I-Hot Melt Glue Isicelo,